ईमेलका लागि सर्वश्रेष्ठ फन्टहरू के हुन्? ईमेल सेफ फन्ट के हुन्? | Martech Zone
ईमेलका लागि सर्वश्रेष्ठ फन्टहरू के हुन्? ईमेल सेफ फन्ट के हुन्?
बिहीबार, जुलाई 27, 2017 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
तपाईले मेरा गुनासोहरू सुन्नुभयो वर्षौं बखत ईमेल समर्थनमा प्रगतिहरूको अभावमा त्यसैले म यसका बारे रोमाञ्जेल धेरै समय खर्च गर्ने छैन। म केवल यो इच्छा गर्दछु कि एउटा ठूलो ईमेल क्लाइन्ट (अनुप्रयोग वा ब्राउजर), प्याकबाट फुटेको र HTML र CSS को नयाँ संस्करणहरू पूर्ण समर्थन गर्न प्रयास गर्दछ। मसँग कुनै सन्देह छैन कि लाखौं डलर कम्पनीहरूले उनीहरूको ईमेलहरू ठीक-धुनमा खर्च गरिरहेका छन्।
त्यसकारण यो ईमेल Monks जस्ता कम्पनिहरु जो ईमेल डिजाइन को हरेक पक्ष को शीर्ष मा रहन को लागी शानदार छ। यो पछिल्लो इन्फोग्राफिकमा, ईमेलमा टाइपोग्राफी, टोली तपाईंलाई टाइपोग्राफी मार्फत हिंडाउछ र कसरी फरक फन्टहरू र उनीहरूका विशेषताहरू तपाईंको ईमेलहरू अनुकूलित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। Clients०% ईमेल क्लाइन्टहरूले अब तपाईंको ईमेल डिजाइनहरूमा एओएल मेल, नेटिभ एन्ड्रोइड मेल अनुप्रयोग (जीमेल होइन), एप्पल मेल, आईओएस मेल, आउटलुक २००, आउटलुक डॉट, र सफारी-आधारित ईमेल सहित अनुकूलित फन्टहरू समर्थन गर्दछ।
त्यहाँ ईमेलमा Fam फन्ट परिवारहरू प्रयोग गरिएको छ
सेरिफ - सेरिफ फन्टसँग फ्लोरिस, पोइन्ट, र आकारहरू छन् जुन उनीहरूको स्ट्रोकको छेउमा छ। उनीहरूसँग औपचारिक रूप, राम्रो दूरीको क्यारेक्टर र रेखा स्पेसिac छ, धेरै पढ्न योग्यतामा सुधार। यस कोटीका सर्वाधिक लोकप्रिय फन्टहरू टाइम्स, जर्जिया र एमएस सेरिफ हुन्।
सान्स सेरिफ - सैन सेरिफ फन्टहरू विद्रोही जस्तो हो जुन उनीहरूको आफ्नै प्रभाव सिर्जना गर्न चाहन्छन र त्यसैले कुनै फेन्सी 'एबेलिशमेन्टहरू' संलग्न हुँदैन। तिनीहरूसँग अर्ध-औपचारिक रूप रहेको छ र यसले व्यावहारिकतालाई बढावा दिन्छ। यस कोटीका सर्वाधिक लोकप्रिय फन्टहरू एरियल, टहोमा, ट्रेबुचेट एमएस, ओपन सान्स, रोबोटो र भर्दाना हुन्।
मोनोग्राम - टाइपराइटर फन्टबाट प्रेरित, यी फन्टहरूको क्यारेक्टरहरूको अन्त्यमा ब्लक वा 'स्ल्याब' हुन्छ। यद्यपि शायद HTML ईमेलमा कम नै प्रयोग भयो, बहुसंख्यक 'फलब्याक' सादा टेक्स्ट ईमेल बहु-ईमेल ईमेलहरूमा यी फन्टहरू प्रयोग गर्दछन्। यी फन्टहरूको प्रयोग गरेर ईमेल पढ्दा सरकारी कागजातहरूसँग सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभूति हुन्छ। यस श्रेणीमा कुरियर सबैभन्दा अधिक प्रयोग हुने फन्ट हो।
सुलेख - विगतका हस्तलिखित अक्षरहरूको अनुकरण गर्दै, यी फन्टहरूलाई के फरक राख्छ भनेर प्रत्येक पात्रले पछ्याएको बिरो आन्दोलन हो। यी फन्टहरू मूर्त माध्यममा पढ्नको लागि अत्यन्त रमाईलो हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई डिजिटल स्क्रिनमा पढ्नु एकदम जटिल र आँखा तनावपूर्ण हुन सक्छ। त्यसो भए त्यस्ता फन्टहरू स्थायी छविको रूपमा हेडिंगहरू वा लोगोमा प्रयोग गरिन्छ।
ईमेल-सुरक्षित फन्टहरूले एरियल, जर्जिया, हेल्वेटिका, लुसिडा, टाहोमा, टाइम्स, ट्रेबुचेट, र भर्दाना समावेश गर्दछ। कस्टम फन्टले केही धेरै परिवारहरू समावेश गर्दछ, र उनीहरूलाई समर्थन नगर्ने ग्राहकहरूको लागि, फलब्याक फन्टहरूमा कोड गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस तरिकाले, यदि क्लाइन्टले अनुकूलित फन्ट समर्थन गर्न सक्दैन भने, यो फन्टमा फ्याल्कब्याक हुन्छ जुन यसले समर्थन गर्न सक्दछ। अधिक गहिरो दृश्यका लागि, ओम्निसेन्डको लेख पढ्न निश्चित हुनुहोस्, ईमेल सेफ फन्टहरू बनाम कस्टम फन्टहरू: तपाइँ उनीहरूको बारेमा के जान्नु आवश्यक छ.
क्लिक-थोरै गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस् यदि तपाईं इन्फोग्राफिकसँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहनुहुन्छ भने।
टैग: AOL मेलस्याउ मेलArialसुलेखईमेलईमेल फन्टहरूईमेल भिक्षुहरूईमेल सुरक्षित फन्टहरूफलो-फिक फन्टहरूफलब्याक फन्टहरूईमेलमा फन्टहरूजर्जियाहेलवेटिकाआईओएस मेललुसिडामोनोग्रामनेटिभ एन्ड्रोइड मेल अनुप्रयोग (जीमेल हैन)आउटलुक 200Outlook.comसफारी-आधारित ईमेलसेन्स सेरिफserifसबैभन्दा ध्वनिTahomaपटकट्रेबुचेटTypographyVerdana
लिंक्डइनले लिंक्डिन वेबसाइट डेमोग्राफिक्स शुरू गर्‍यो
सबै अमेरिकी र सीईओ जेरेमी ब्लूम एकीकृत छलफल गर्दछ
जुलाई,, २०१ at 28::2017। बिहान
नमस्ते डग्लस, रमाइलो र रमाईलो लेख पढ्नुहोस्। मलाई यसको बारेमा प्रश्न छ "ईमेल ग्राहकहरूको of०% अब तपाइँको ईमेल डिजाइनहरूमा प्रयोग गरिएको कस्टम फन्टहरू समर्थन गर्दछ"। के कुनै चालु प्रोजेक्ट वा नयाँ टेक्नोलोजी जुन यसलाई १००% सम्म पुग्नको लागि ल्याइएको छ?
वाह, म चाहन्छु! मलाई लाग्छ कि यो प्रयोगकर्ताहरूको संयोजन हो कहिले कहिले अद्यावधिक हुँदैन साथै ईमेलमा कमजोर मापदण्ड पनि। यो हामी सबैको लागि दुर्भाग्य हो!